के आइसीसीको बैठकले नेपालको निलम्बन पुर्ण फुकुवा गर्ला ? - Nepal Cricket
के आइसीसीको बैठकले नेपालको निलम्बन पुर्ण फुकुवा गर्ला ?
आईसीसीले राखेका सबै सर्तहरु पालना गरेको बताइरहे पनि क्यानको निलम्बन पुर्णरुपमा फुकवा हुन्छ या हुँदैन त्यौ अझै अनुत्तरित प्रश्नको रुपमा रहेको छ । यस्तैमा आर्ईसीसीको आइतबार बैठक बस्दै छ । आईसीसीको बैठक बस्दै गर्दा नेपालको पूर्णरुपमा निलम्बनको एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्छ की पर्दैन त्यो पनि पतिक्षाको विषय नै छ ।
क्यान निलम्बन हुँदा नेपाली क्रिकेटको धरातललाई राम्रोसँग बुझेको आईसीसीले नयाँ कार्यसमिति आएपछि पनि केहि समय यसको कामलाई निगरानिमा राखेको थियो । अहिले पनि नेपाली क्रिकेटमा हुने गरेका केहि सानातिना गल्तिको जानकारी विभिन्न ब्यक्तिले आईसीसीमा पुर्याउने गरेको बताइन्छ । जसका कारण पनि अहिलेको कार्यसमिति प्रति आईसीसी अझै पनि पुर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसकेको हो की भन्ने प्रश्न पनि यथावत छ ।
अहिले क्यानले आईसीसीबाट नियन्त्रित ‘फण्ड’ (पैसा) लिइरहेको छ । अर्र्थात क्यानले आफ्नो योजनाहरु पठाउने र त्यसका लागि मात्र आईसीसीले रकम पठाउने गरेको छ । त्यसमा अहिले आईसीसीले मुख्य गरेर खेलाडीको तलव, कर्मचारी, ग्राउण्ड स्टाफको तलव र प्रतियोगिता हुँदा क्यानले पठाएको योजना अनुसारको बजेट मात्र ‘रिलिज’ गरेको छ ।